Imfono-mfono yokuDlulisa idesktop ye-imeyile ivula | Martech Zone
Andikholelwa ukuba ndohlukile kunabantu abaninzi. Ndijonga i-imeyile imini yonke kwi-iPhone yam ukuze xa ndifika emsebenzini, ndikwazi ukugxila kwimiba ebaluleke kakhulu. Isixhobo sam esiphathwayo sisixhobo sam esiphambili ekuvuleni nasekuhleleni imiyalezo endiyifumanayo. Ewe akunakulimaza xa ezo imeyile zenzelwe izixhobo zeselfowuni. Ukuba ufuna uncedo olongezelelekileyo lokufumana i-imeyile yakho ukuba ihambelane neselfowuni, qiniseka ukukhuphela indlela yokwenza i-imeyile yakho iFowuni eFanelekileyo.
Ababhalisi bafumana ii-imeyile kumaqonga aliqela nakwizixhobo. Kungenzeka ukuba i-imeyile yakho ibetha i-inbox ye-Gmail, ikhanyise iselfowuni, kwaye idluliselwe kwiakhawunti yabo yomsebenzi. Kodwa uyazi ukuba abaphulaphuli bakho bavula phi i-imeyile yakho yamva nje?
le infographic evela eLitmus unikezela ubungqina bokuba ekugqibeleni ujikile kwaye iselfowuni igqithile kumxhasi we-imeyile yedesktop!
tags: emailI-imeyile ye-imeyilei-litmusimeyile ephathekayoUyilo lwe-imeyile ephathekayoIzibalo ze-imeyile eziphathwayo